Nnwale ngwa ngwa mkpanaka bụ ihe dị oke mkpa na ntinye ngwa ngwa ọ bụla. Ọ bụ ezie na ngwa mkpanaka na-aga nke ọma nwere njikọ aka dị egwu ma nyekwa ndị ahịa na azụmaahịa nnukwu uru, ngwa ngwa na-adọkpụ abụghị naanị ọdachi ị nwere ike idozi.
Mwepu nke ngwa mebiri emebi ma ọ bụ ngwa na-ejighị arụ ọrụ nke ọma ga-akụda nnabata, na-agbada nyocha na-adịghị mma… mgbe ị ga-edozi ngwa ahụ, ị ​​nọ n'azụ bọọlụ asatọ.
nnabata - Ngwa ekwentị mkpanaaka gị ọ nwere nchebe, njedebe ya niile echedoro, ma na-agbaso usoro iwu niile chọrọ tupu ị dị ndụ? Mgbe ị na-anwale ya, ịchọrọ ijide n'aka.